DEPIOTE LES ROBERT SY NY VADINY : Tratran’ny lozam-pifamoivoizana tao Analamalotra
Ny tolakandron’ny alarobia 16 oktobra tamin’ny 3 ora sy sasany teo ho eo, nitrangana lozam-pifamoivoizana tao Analamalotra lalam-pirenena fahadimy iny. 18 octobre 2019
Ny solombavambahoaka voafidy tao Mananara-Avaratra sady mpanakanto Les Robert io niharam-boina io. Nandeha moto niaraka tamin’ny vadiny sy tovolahy iray izy. Ho eny amin’ny tanimbolin’izy ireo ao Ivoloina no anton-dia. Raha ny fanazavana voaray, dia niala fiarabe i Les Robert, nahazo sisin-dalana. Nisy vatokely nisavovona anefa teo alohany ka tsy nisy azo nialana intsony. Tafanika ilay vatokely na “gravillon” ny moto izay nentiny. Nipitika izy telo. Ny vadiny no tena voa mafy, torana tsy nahatsiaro tena. Nisy faharatrana teo amin’ny tanana, loha ary tratra kosa i Les Robert. Tsy dia nisy voa loatra kosa ilay tovolahy niara-dia tamin’izy mivady.
Nalefa avy hatrany teny amin’ny Hopitaly Manara-penitra izy telo. Ny marainan’ny alakamisy 17 oktobra tamin’ny 7 ora sy sasany, nanapa-kevitra ny mpitsabo azy mivady nandefa azy ireo any Antananarivo tamin’ny alalan’ny fiaramanidina hanohy ny fitsaboana. Izahay eto amin’ny gazety Ino Vaovao Faritra dia mirary fahasalamana tanteraka ho azy ireo.
Lavanila manta 31 kg nopotehina sy nodorana tao amin’ny biraon’ny Kaompanian’ny Zandarimaria ANDAPA (172) 22 mai 2020 Nihena 20 000 taonina ny fanondranana lojy mainty maso KALITAON’NY VOKATRA (94) 22 mai 2020 Nampidirina am-ponja vonjimaika ireo mpidongy tany FISOLOKIANA TANY TENY FENOARIVO (91) 22 mai 2020 Voasambotry ny fokonolona sy zandary ilay mpimasy mpitaiza dahalo DISTRIKAN’ANTSALOVA (83) 26 mai 2020 Hitory ilay renikely ny Talem-paritry ny mponina Faritra Sava FAMPIJALIANA ZAZAKELY AO ANDAPABE (80) 26 mai 2020 Miisa 405 ireo voamarina fa mitondra ny tsimok’aretina FIVOARAN’NY “COVID-19” (72) 22 mai 2020